Soavina : Taolam-paty 35 kg tra-tehaka -
AccueilSongandinaSoavina : Taolam-paty 35 kg tra-tehaka
Soavina : Taolam-paty 35 kg tra-tehaka
Taolan-dava miisa 250, milanja 35 kilao no tra-tehaky ny polisy tamin’ny olona miisa enina, izay nahitana lehilahy efatra sy vehivavy roa ny sabotsy 02 desambra teo, tokony ho tamin’ny 02 ora sy sasany tolakandro tany ho any. Teny Soavina Atsimondrano no nahatrarana ireo taolambalo marobe ireo, izay nentina tao anaty fiarakaretsaka. Araka ny voalaza, dia fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo, ny 27 novambra lasa teo no nahafantaran’ny mpitandro filaminana ny fisian’ireto olona nitondra taolam-paty, izay handalo eny amin’ny faritr’ i Soavina sy Bevalala ireto. Nandray ny andraikiny avy hatrany, ahafahana misambotra ireo olona tao ambadik’izay ireo polisy. Nandalo ary tsikaritr’izy ireo tokoa, tamin’ny fotoana voatondro ireo fiarakaretsaka roa nifanarakaraka nitondra ny entana, ka nosakanana ary nasain’izy ireo nijanona. Tsy izay anefa no nataon’ireo mpamily, fa lasa izy ireo nirifatra nitsoaka na dia efa nandefa poa-basy fampitahorana aza ireo mpitandro filaminana. Nifanenjehana noho izany ireo olon-dratsy, ka tsy lasa alavitra dia tratran’izy ireo, ary nosamborina avy hatrany. Rehefa natao ny fakana am-bavany azy enina mianadahy ireo, dia fantatra fa tamin’ny alalan’ny vaky fasana iray tany amin’ny fokontany Anjanamanga, kaominin’Ambatomanga, Distrikan’Arivonimamo no nahazoana ireo taona milanja amin’ny kilao maromaro ireo.
Fantatra nandritra ny famotorana ihany koa fa ny roalahy, izay mipetraka any amin’io toerana voalaza io no niditra an-tsehatra tamin’ny famakiana io fasan’olona io, ary nitatitra ireo taolam-paty ireo tamin’ny alalan’ny bisikileta hatreo Mahitsy. Nentina tamin’ny taksiborosy indray izany avy eo, ary nafangaro tamin’ny arina fandrehitra mba tsy ahafantarana azy.Teny amin’ny toerana fangalana solika iray etsy Ampasika no noraisin’ireo fiarakaretsaka ireo taolambalo ireo, ka nokasaina haterina any Soavina izao sarona izao.Voalaza nandritra ny fanadihadiana hatrany, fa dimy hetsy Ariary no hivarotan’izy ireo ny iray kilao amin’ ireo taolam-paty halatra ireo, izay mety nahazoan’izy ireo vola 17 tapitrisa Ariary mahery , raha tsy tratran’ireo mpitandro filaminana. Fantatra ihany koa fa teratany sinoa no saika handray sy hividy izany. Marihina fa mbola misy roalahy hafa, izay mpiray tsikombakomba amin’ izy enina mianadahy ireo, ary lohandohan’ny mpisorona amin’ity resaka fivarotana taolam-paty ity mbola karohina amin’izao fotoana izao.Efa tapitra moa ny fanadihadiana sy ny fe-potoana ahafahana mitazona azy ireo eny amin’ny biraon’ny polisy eny Tanjombato, ka anio no hatolotra eo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha.
Ho fampaherezana ny vehivavy malagasy rehetra dia nisy ny fotoam-pivavahana, notontosaina teny amin’ny Chapel Militaire Ampahibe, omaly, niarahan’ny vadin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Voahangy tamin’ireo vadin’ny mpitandro filaminana rehetra, izay tafiditra sahady ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny ...Tohiny
Fifamoivoizana eto an-drenivohitra : Hanomboka ny fanamboarana ny « Fly Over »